မန္တလေး မှာလည်လည် စားမယ်.. | The Restaurant Guides for Myanmar
မန္တလေးရွှေမြို့တော်ဆီကို လည်လည်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် စားမယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ Foodies ချစ်တို့အတွက် စားသင့်တဲ့ဆိုင်လေးတွေ၊ အစားအစာအမျိုးအစားလေးတွေ၊ လက်ဆောင်ဝယ်စရာလေးတွေ စတဲ့ အမျိုးအစားလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
ပထမဦးဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ မင်မင်လည်း မန္တလေး‌ရောက်ရင် အမြဲစားချင်တဲ့ အစားအစာလေးပါ..မန္တလေး က မုန့်တီ.. မုန့်တီ နဲ့မန္တလေးဆိုတာ ခွဲခြားလို့မရပါဘူး...
မန်းလေးမြို့ကို ရောက်ပြီဆို ဘာစားမလဲ မောင်ရေခဲ ဟု အစချီမေးလျှင် လူတိုင်းနီးနီး တစ်ရာမှာ ၉၉ ‌ရောက်က မန်းလေး မုန့်တီကို တောင့်တ ကြတာပင်..မန်းလေးမုန့်တီမှာ ပဲမှုန့်များများ ဆီချက် အသားများများနှင့် ဖြစ်ပြီး သူ့ကို တွဲစားရန် ဆိုင်က ကြက်သွန်နီနှင့် သံပုရာသီးပေးတတ်ပေသည်..
၃၁ လမ်း ၈၄x၈၅ ကြားက စိုးစိုးမုန့်တီ…
သူ့ အောက်ဖက်တပြ မလွန်မုန့်တီတန်းက ဒေါ်သောင်းစိန်က ပိုစားကောင်းသလိုပင်..
၂၆-၂ရ ကြား မြို့တော်ဥယျဉ်အရှေ့ဖက် ဒေါ်တော မုန့်တီကလည်း အမဲကြောနဲ့စားလို့ကောင်းတာပင်၊ ဒါပေမယ့် သူက မနက် နည်းနည်းနောက်ကျရင် ကုန်ပြီ..မုန့်တီကို သိပ်လဲ ဈေးမကြီးပဲ သိပ်လဲ မအီတဲ့ ခိုတောင်နဲ့ မုန့်တီကြား စပ်ကြားလေး စားချင်ရင်တော့ ဗောဓိကုန်းထဲက Dynasty လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့က ဆိုင်သေးသေးလေးရှိသည်..
ဘုရားကြီးအာနန္ခာစောင်းတန်းက ကြီးတော်ခွေးကတော့ မုန့်တီ မရောင်းတော့ဘူး ထင်ပါတယ်၊ တခါသွားတော့ ထမင်းပဲ ရောင်းတော့တယ် ဆိုလား.......
မန်းလေးမြို့သည်ကား ရှမ်းပြည်နယ်၏ တရုတ်မြို့တော် ဖြစ်သောကြောင့် အဲလေ မွှားလို့ ရှမ်းပြည် တရုတ်ပြည်တို့နှင့် နီးသောကြောင့် ရှမ်းအစားအစာ အလွန် ပေါလေသည်.. မနက်မိုးလင်းသည်နှင့် တပြလျှင် ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင် တစ်ဆိုင်အနည်းဆုံး တွေ့ရပေမည်.. နေ့လယ်စာ ညနေစာအတွက်လည်း ရှမ်းထမင်းပုံစားဆိုင်များတွင် မြောက်ပိုင်းရှမ်းတို့၏ လက်ရာအား ငွေကျပ်တစ်ထောင်နှင့် သုံးဆောင်နိုင်ပေ၏ ..
ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်တွေကတော့ ပေါလွန်းများလွန်းလှသဖြင့် နည်းနည်းပဲညွှန်းတော့မည်..၇၄လမ်း ၃၄x၃၅ ကြားမှာ ရွှေမူဆယ်ရှိကာ အချိုအရသာ ကြိုက်သူတွေနှင့် သင့်တော်၏ ..သည်ဆိုင်တွင် ဆန်ချိုအေးလဲ ရသည်..
လမ်း ၈၀ မြကေခိုင်ဘေးကဆိုင်ကတော့ မနက်ဆိုလျှင် ကားတွေ တန်းစီနေတာပင်..
ညဘက် ရှမ်းခေါက်ဆွဲ မြေအိုးမြီးရှည် စားချင်ရင်တော့ ၇၆လမ်း ၃၄x၃၅ ကြားက ညဈေးတန်းကို ပင် ညွှန်ရမည်ပင်..
ညဈေးတန်းမှ လားရှီုးဆိုင်တွင် ရှမ်းတို့ဟူးပျော့ .. ဝက်ခြေထောက်ခေါက်ဆွဲ ကောင်းသည်..
အမဲလုံးခေါက်ဆွဲဆိုလျှင်တော့ ၃၅ လမ်း ၆၉x၇၀ ကြား က ဆိုင်က တော်တော်ကောင်းသည် ၊ ဆန်စီး အညိုနဲ့ ပိုကောင်းသည်၊ ( သူ့ဆိုင်ဘေးမှာ အိုးဆိုင် ရှိတယ်ဗျ )
မန်းလေးတွင် ပုံစား ရှမ်းထမင်းဆိုင်များမှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက် အားထားရာပင်၊ ပိုက်ဆံ ၈၀၀၊ ၁၀၀၀ ဖြင့် ထမင်းတစ်နပ်ကို ဟင်းသုံးမျိုး ဖြင့် စားနိုင်သည်..
ဆေးကျောင်းတဝိုက်မှာတော့ လင်းလင်း၊ အေးချမ်းမြေ စသည့်ဆိုင်များရှိပြီး..လမ်း ၇၀ ၂၉x၃၀ ကြားတွင်လည်း ရှမ်းထမင်းဆိုင်များ အတန်းလိုက် ရှိသည် ..
ရေစစ်ကန်နားက ဝင်းစံပါယ်ကတော့ ထမင်းမရပေမယ့် အခြား ရှမ်းအစားအစာ ငါးထမင်း .. ဟင်းထုပ်.. ငါးဒုက္ခ ရသည်.. ဆမ်ဆိုင်းမြီးရှည် ၊ သဘောင်္သီးထောင်း စားကောင်းသည်..
မန်းလေးမှာ ဒံပေါက်ဆိုရင် ၂၆ လမ်း ကျုံးဘေးမှာ ဒေါ်သန်းမူ ရှိပါတယ်.. မြို့မရုံနဲ့ မျက်စောင်းထိုးမှာ သင်း ရှိပါတယ်။၈၃လမ်း ၂၈x၂၉ ကြားမှာ ပေါ်ပီ အဲလေ သင်္ဂဟ ဒံပေါက် ရှိပါတယ်..
ကေမီမွန်ဒံပေါက်စားချင်ရင်တော့ အလှူအိမ်သာ တွေ့အောင် လိုက်ရှာကြပါ..ကျုံးမြောက်ဘက် ဂေါက်ကွင်းသွားတဲ့လမ်းမကြီးကနေ အနောက်ဘက်ကို ဖဲ့ဆင်းပြီုး မြောင်းလေးကို ကျော်လိုက်ရင် လမ်းဘေးမှာ ဒံပေါက်ဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်.. မနက်အစောကြီးရောင်းတာပါ.. ၈ နာရီလောက်ဆို ကုန်ပါပြီ.. ဒံပေါက် . ပဲထမင်း . အုန်းထမင်းရပါတယ် .. တစ်ပွဲမှ ၂၀၀ ရယ် ကြက်သားထည့်မှ ၇၀၀ .... စားလို့လဲကောင်းပါတယ်....
လူအများက လွယ်လွယ်နှင့် ထိုးမုန့် ခေါ်သော်လည်း အမှန်မှာကား ထိုခေါင်းစဉ်အောက်တွင် မာစကပ်၊ အိတုံ၊ ဒိုဒိုး ၊ဆနွင်းမကင်း၊ ရွှေကြည်၊ လမုန့် စသဖြင့် အမျိုးပေါင်းများစွာ ပါသည့်အပြင် တစ်မျိုးစီတွင် မလိုင်၊ သီးစုံ ဆိုပြီး ထပ်ခွဲသေး၏.. ထို့ကြောင့် ဘာဝယ်ရမှန်း မသိလျှင် ထိုးမုန့်ဆိုင်တွင် အမြည်းစားပြီးမှ ကြိုက်ရာရွေးဝယ်နိုင်ပေသည်.. ( မင်မင်ကတော့ ဘယ်သူ ထိုးမုန့်ဝယ်ဝယ် အမြည်းလိုက်စားတယ် )....
<> ကြာဇံကြော်၊ ခေါက်ဆွဲကြော် ၊ ငါးရေခွံကြော်
မန်းလေးမှာ ဒန်အိုးအကြီးကြီး ရွက်လာတဲ့ အသည်မြင်ရင် ဗေဒင်မမေးနဲ့ ကြာဇံကြော်၊ ခေါက်ဆွဲကြော် သည် ပင်.. သည် အသည်တွေဆီမှာ ရတာ နောက်တမျိုးကတော့ ငါးရေခွံကြော်ပါ... ငါးဖယ် အရေခွွံကို ကြွပ်နေအောင်ကြော်ထားပြီး မန်းကျည်းမှည့် အချဉ်ရည်နဲ့ တို့စားလဲ ရသလို ၊ ငရုတ်ဆီ အချဉ်ရည် ဘာညာသရကာ ထည့်ပြီးလည်း သုပ်ရောင်းသည်..
မန်းလေး ဝက်သားတုတ်ထိုးက ရန်ကုန်နဲ့ မတူ.. ရန်ကုန်တုတ်ထိုးကား င်္ဆီများ၏.. ဆီကြော်နှင့်တူ၏.. မန်းလေးတုတ်ထိုးကား ဟင်းရည်ထဲတွင် ပြုတ်ထားတာနှင့်တူပြီး တုတ်ထိုးဟင်းရည်ကို ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီး ဓါးပြားရိုက်လေးထည့် သံပုရာရည်လေး ညှစ်သောက် ၊ ဒါမှ မဟုတ် ထမင်းဆီဆမ်းနှင့် ဆမ်းစား ( ရှလွတ် ) အရသာ ရှိလေသည်..တုတ်ထိုးဆိုင်များတွင် ကြာဇံကြော် ကော်ပြန့်ကြော် ဖက်ထုပ်ကြော်များပါ ရတတ်သည်..
၃၄လမ်း B.N ဗားမား မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် တွတ်ပီ ဝက်သားတုတ်ထိုးရှိသည်.. တုတ်ထိုးအပြင် ကြာဇံကြော် နှင့် ကော်ပြန့်လဲရသည်.. သူ့ကော်ပြန့်က အထဲမှာ ဝက်သား အစာသွပ်ထားသဖြင့် အသားလိပ်လိုမျိုးဖြစ်ကာ စားကောင်းသည်.. ဒါပေမယ့် ဟင်းရည်ကနည်းနည်းပေါ့သည်.. ( တုတ်ကြီးကြားရင် ဓါးနဲ့လိုက်ခံရဦးမယ် )
လမ်း ၃၀ ၆၉ လမ်းထောင့်မှာ တုတ်ထိုးတစ်ဆိုင်ရှိသည် .. သူလည်းမဆိုး.. လမ်း ၇၀ ၃၂ထောင့် အာကာမင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့က တုတ်ထိုးကတော့ ကြံမဆိုင် ဟင်းရည်နှင့်ဖြစ်သည်.. လမ်း ၃၀ ၈၁x၈၂ကြားကဆိုင်လဲ စားသူများသည်..
ရတနာပုံဈေး KD ကြယ်သီးဆိုင်ရှေ့က ဆိုင်ကတော့ ဈေးမီးလောင်ပြီး ဘယ်ရွှေ့သွားလဲ မသိ.. သူ့ညီမတွေကတော့ ၁၄ ကျောင်းရှေ့မှာ ထွက်သည်..
၁၆ ကျောင်းရှေ့က မြင့်လွင်လည်း နာမည် ကြီးသည်၊ ဒါပေမယ့် ဈေးကြီး သလိုပါပဲ..(ကဲမှတ်ထားကြနော် မြင့်လွင် ဝက်သားတုတ်ထိုးတဲ့ ၆၈ လမ်း x ၂၈ လမ်းထောင့် လို့ ) ဗောဓိကုန်းဘက်က ၆၉လမ်းကို အကွေ့ဘက်မှာ once more တို့လို တုတ်ထိုးဆိုင်လေးတွေလည်းရှိသည်..
လမ်း ၈၀ ဖားသားလဖုန်းကျောင်းရှေ့မှ ဖောင်တော်သီတွင် အအေးနှင့် သဘောင်္သီးထောင်း ကြက်ညှပ် ရသည်.. အဲ့သည်ဆိုင်မှာ ကျနော်အကြိုက်ဆုံးက နို့အေးပါ..ကျုံးရှေ့ဘက်မှာ ညဘက်ဆိုလျှင် အစိမ်းရောင် နယ်မြေ ရှိသည်..
Breeze ကတော့ လမ်း ရ၀ ၃၂x၃၃ ကြားတွင် ရှိပြီး ကောက်ညှင်းပေါင်း နှင့် အကြော်စုံပါရသည်.. ဆေးကျောင်းတဝိုက်တွင်လည်း အအေးလှည်းလေးတွေ တော်တော်များသည်..ကျောင်းတက်တုန်းက ကျနော်တို့ တဖွဲ့ရဲ့ ရုံးချုပ်က အချစ်ရွာရှေ့မှ ဦးလေးကြီးဆိုင်တွင် ဖြစ်သည်.. ဦးလေးကြီးဆိုင်က ကော်ဖီအေးကတော့ ကျနော့် အသဲစွဲပင်.. တစ်ရက် ကို ၃ ခွက်လောက်သောက်ဖြစ်သည်.. ( star buck ထက်တောင်ကြိုက်သေးတယ် ) .... ပြီးတော့ ဦးလေးကြီးဆိုင်က ကျောင်းထဲ အဝင်အထွက်ကော လမ်း မပေါ်ကော အချစ်ရွာထဲပါ မြင်ရလို့ အကွက်အကွင်းကောင်းသည်.. ( အချင်းချင်းတွေဆိုတော့ ကပ်ကြော်ငြာပေးတာ )
ကော်ဖီဆိုင်များတွင် လမ်း ၈၀ ၂၅ ထောင့်က V Cafe က အရင်ကတော့ စားဖိုမှူးတော်တော်ကောင်းသည် .. အခုတော့ ပြောင်းသွားပြီလားမသိ ( အမဲသား ဘာဂါ တော်တော့်ကို ကောင်းသည် )..
ကျုံးရှေ့က Cafe City ကတော့ နေ့လယ်ဘက် ညဘက်ဆို လူများပြီး ဆူလွန်းလို့ မထိုင်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပြီ..
JJ ကတော့ အစားအသောက်လဲ မဆိုး .. ခုနေရာ အသစ်ပြောင်းပြီးတော့ မရောက်ဖြစ်တော့ ။။။
BBB က တော့ Mixed Grill ကြိုက်သည်..cafe melody က ဆိုင်ကျဉ်းပါတယ်..
၂၇ လမ်း လမ်း ၇၀ ထောင့်က Coffee Corner ကတော့ ဒီနောက်ပိုင်း ထိုင်ဖြစ်သည်… အဲ့သည်ဆိုင်မှာ ကျနော်တို့ အကြိုက်က Chicken Basket .. spaghetti bolognaise နှင့် JD coffee ဖြစ်သည်... ( ကိုသူရအောင် ဖျော်တဲ့ JD coffee က ပိုသောက်ကောင်းတယ်ဗျ )
ထိုင်လို့ နည်းနည်းကောင်းတဲ့ ဆိုင်ပဲ ညွှန်တော့မယ်..
၃၅ လမ်းက Beer Rain ကတော့ သုံးထပ်မှာ အောက်ဆုံးထပ်က ဒီတိုင်းဝိုင်းလေးတွေ .. အလယ်ထပ်က ကော်ဖီဆိုင် ခပ်ဆန်ဆန် အဲကွန်းခန်းနဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ်က လဟာပြင် ကြိုက်တာ ထိုင်ရုံပင်၊ အဲ့ဒိဆိုင်မှာ ကောင်းတာကတော့ ငါးအရိုးလွတ်.. မှိုကန်စွန်းနဲ့ .. ဝက်ပေါင်ခြောက်သုပ်ပါ..
အဲ့ဒါနဲ့ မျက်စောင်းထိုးလောက်မှာ ရွှေကောင်းကောင်းရှိသည်..
လမ်း ၃၀ အကင်တန်းမှာတော့ ကျနော်တို့ ကိုသူရိန်တို့ ထိုင်တတ်သည့် အမြဲကောင်း ရှိသည်.. အဲ့သည်ဆိုင်က ခရုဟင်း ကောင်းသည်..ကျုံးအရှေ့ဘက်မှာဆို ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ Paradise ရှိသည်.. အင်းဝ ကတော့ မိန်းကလေး ထိုင်လို့ သိပ်မကောင်းလို့ ထင်သည်..
၇၃ လမ်း ၂၇ နှင့် ၂၈ မှာ ဝင်းဝင်းရှိသည်၊ သူက စည်ဘီယာမရ.. ပုလင်းပဲရသည် ဒါပေမယ့် ကျနော်က သူ့ဆိုင်က မာလာဟင်း ကြိုက်သည်..သိပ္ပံလမ်းဘက်မှာဆို Jasmin Garden ရှိသည်၊ သူ့ဆိုင်က ငါးမျှစ်ချဉ်စားကောင်းသည်.. ( နည်းနည်းတော့ သံပုရာသီးလေး ညှစ်လိုက် ဆားထည့်လိုက်နဲ့ ပြင်ယူရတယ်)
ကုတင် ၃၀၀ ဆေးရုံနားမှာ ရွှေဆည်းဆာ ရှိသည်.. အရင် ကတော့ အာလူးကြော်ကောင်းသည်.. ( အခုတော့ အကြော်ဆရာ ပြောင်းသွားပြီ ထင်တယ် )
၆၁လမ်း မှာ M Bar ရှိသည်.. ပါတီ လုပ်ချင်သူများ အတွက်တော့ သင့်တော်သည်..ကန်တော်ကြီးမှာဆို ဝင်းဝင်းရှိသည်.. ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့်သောက်ချင်လျှင် ကောင်းကောင်းရှိသည်.. ဒဏ္ဍာရီ ရှိသည်..
ဆခွံနှင့် ရှမ်း အရက် ကြိုက်တတ်လျှင် ရတနာပုံဈေး အရှေ့ဘက်မှာ သျှမ်းသျှမ်းတောက် ရှိသည်..
ဈေး တောင်ဘက်က 115 ကတော့ အရက်သမားဝါရင့်ကြိးတွေ ဆိုင်ထင်တာပဲ.. အဲ့ဒီဆိုင်က ဂျင်သောက်ကောင်းသည်..
<> မနက်စာ ထမင်းကြော်
မနက် ထမင်းကြော်စားချင်သည့်သူများအတွက် ၃၅ လမ်း ၇၉ လမ်း နဝရတ်ရိပ်သာထဲတွင် နံနက်ခင်း ရှိသည်..
၇၁လမ်း ၂၇ လမ်းထောင့်က မူလတန်းကျောင်းဝင်းလေးထဲမှာ လည်း ထမင်းကြော်ဆိုင်တစ်ဆိုင် ရှိသည်.. သူက အသားကြော် အရံ မျိုးစုံနှင့်ရသည်..
သူနှင့်မျက်စောင်းထိုးက အိမ်ဆိုင်လေးကတော့ ထမင်းကြော်တစ်ပွဲကို ခေါက်ဆွဲကြော်နဲ့လဲ စပ်လို့ရသည်.. ကြာဇံကြော်နဲ့လဲ စပ်လို့ရသည်..
<> ညနေစာ ထမင်းကြော်
ညနေဘက်ဆိုလျှင်တော့ ၇၇ လမ်း တောက်လျှောက်တွင် အာစင်နယ် ရွှေမန်းမေ အစရှိသော လှည်းတွေနှင့် ထမင်းကြော်ဆိုင်တွေရှိသည်.. ကြက် ဝက် ဆိတ် ငါး အကြော်မျိုးစုံ နှင့် ထမင်းကြော်ကို ငံပြာရည်ဆီသတ် . ငပိထောင်း ၊ တို့စရာ၊ ချဉ်ရည်နှင့် မြိန်မြိန်ကြီးစားနိုင်သည်..
ပုရစ်ကြော်ကတော့ ရာသီစာဖြစ်သဖြင့် မိုးအကုန် ဆောင်းအကူးမှာသာ ရတတ်သည်.. ရန်ကုန်မှာ ရောင်းတဲ့ ပုရစ်ကြော်ကတော့ ဘုရားစူး ပုရစ်ကြော်ပင် ၊ ( အမျှင်မဖြတ် အတောင်မဖြတ် ခြေမဖြတ် ချီးမထုတ် ပဲ ဒီတိုင်းကြော်ရောင်းသတဲ့ အရပ်ကတို့ရဲ့ ).. သန့်စင်ပြီးသား ပုရစ်ကို ကြက်သွန်ဖြူ ဂျင်းနိုင်နိုင်နဲ့ ကြော်ထားသည်မှာ ကျွပ်ရွ မွှေးပျံ့ကာ ထမင်းဆီဆမ်းနဲ့ စားစား ဒီတိုင်းမြည်းမြည်း အရသာ ရှိတာပင်..
<> ဘုရားပွဲ မုန့်များ
မန်းလေးကို ဆောင်းရာသီမှာ သွားလျှင်တော့ မြို့တွင်းရှီ လမ်းတွေမှာ တစ်လမ်းမဟုတ် တစ်လမ်း ဘုရားပွဲနှင့် တွေ့ရမှာပင်၊.. ဘုရားပွဲများတွင် မြန်မာမုန့် မုန့်ပေါင်း၊ မုန့်အုပ်ကလေး ၊ မုန့်ဆီကြော်၊ မုန့်ပစ်သလက်၊ ခဲလံချောင်း၊ မုန့်ဆပ်သဖူး ၊ အမဲအူပြုတ် အစရှိသည်တို့ကို မြည်းစမ်းနိုင်ပေသည်..
ကဲဒီလောက်ဆိုလျှင် မန္တလေးကိုရောက်လို့ လည်လည်သွားမယ်စားမယ် ဆိုသူတွေ အဆင်ပြေလောက်မယ်ထင်ပါတယ်...ဒါပေမဲ့ လည်လည်စားမယ်ရဲ့ အပိုင်း (၂) ရှိသေးတယ်နော်..
North Okkalapa - Yangon